के पर्स्लेनले प्रोस्टाटाइटिसलाई मद्दत गर्दछ??
समय: 2019-08-16 दृश्य:
पर्स्लेन ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड र एन्टिऑक्सिडन्टहरूको समृद्ध तरकारी स्रोत मानिन्छ, tocopherol सहित, एस्कोर्बिकएसिड, बीटा क्यारोटीन, र ग्लुटाथियोन. अल्फा-लिनोलेनिक एसिड सामग्री कन्टार्टरसँग भिन्न हुन्छ, भूगोल, र वातावरणीय कारकहरू, बीउहरू र डाँठहरू भन्दा पातहरूसँग ठूलो प्रतिशत छ. पर्स्लेनमा कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ, लिपिड, ग्लाइकोसाइडहरू, alkaloids (oleraceins सहित), स्टेरोल्स, कौमारिनहरू, triterpenes, र flavonoids। प्लान्टको फिनोलिक घटकहरूमा स्कोपलेटिन समावेश हुन्छ, bergapten, isopimpinellin, lonchocarpic एसिड, रोबस्टिन, जेनिस्टिन, र अन्य। पोर्तुलाका प्रजातिहरूको पातहरूमा रहेको एमिनो एसिडहरूमा फेनिलालाइन समावेश छ, alanine, टायरोसिन, र एस्पार्टेट। प्लान्ट एसिडले साइट्रिक समावेश गर्दछ, मालिक, एस्कॉर्बिक, सुसिनिक, fumaric, र एसिटिक एसिडहरू। पी को वाष्पशील तेल. ओलेरासिया पनि अध्ययन गरिएको छ र मुख्यत: लिनालुल र 3,,7,११,१--टेट्रामेथाइल-२-हेक्साडेन-१-ओएल समावेश गर्दछ।.
पर्स्लेन भिटामिन एको समृद्ध स्रोत हो, बी, सी, र E र क्यारोटीनोइड सामग्रीमा उच्च छ, बीटा क्यारोटीन सहित. क्यालसियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, फोलेट, लिथियम, र melatonin पनि उपस्थित छन्.
प्राचीन समयमा, purslane दुष्टात्माबाट बचाउन प्रयोग गरिएको थियो. पर्स्लेनको औषधीय प्रयोग कम्तिमा पछाडि फर्किन्छ 2,000 वर्ष, तर यो अवधि भन्दा पहिले यो खानाको रूपमा राम्रोसँग प्रयोग गरियो. पर्स्लेनका लागि परम्परागत औषधीय प्रयोगहरू व्यापक छन्. पुरातन रोमीहरूले पेचुरी उपचारको लागि बगैंचा प्रयोग गर्थे, आन्द्रा कीडे, टाउको दुखाइ, र पेट दर्द. पारम्परिक चिनियाँ चिकित्सामा यो हजारौं बर्षदेखि प्रयोग भइरहेको छ (TCM) र को रूपमा उल्लेख छ "लामो जीवन को लागि तरकारी।" हवाई भागहरू सुकाइन्छ र ज्वरोको लागि प्रयोग गरिन्छ, पखाला, कार्बन्कल, एक्जिमा, र hematochezia.
आजकल पुरस्लेन प्रोस्टाटाइटिस को लागी एक व्यापक मान्यता प्राप्त उपचार हो.
कसरी Purslane काम गर्दछ?
यो एक अध्ययनको अवधिमा प्रमाणित भयो जुन पुरुषको प्रोस्टेट टिश्युहरूमा परिवर्तन meas महिना पछि 20२० मिलीग्राम पर्स्लेनको taking महिना लिने परिवर्तन पछि मापन गरिएको थियो।.
यो देखाइयो कि purslane प्रोस्टेट ग्रंथि को भित्री अस्तर मा सूजन कम जुन मूत्रमार्गको वरिपरि छ.
एसडी पुरुष मुसा नियन्त्रण द्वारा अनियमित रूपमा तोकिएको थियो, मोडेल र उपचार समूहहरू (6/समूह). मोडेल र उपचार समूह इंजेक्सन गरिएको थियो 25% जिओजिलिंग (0.2mL, चिनियाँ जडिबुटीबाट बनाइएको एक प्रकारको हेमोराइड ईन्जेक्शन, जुन प्रोस्टाटाइटिस प्रेरित गर्न प्रयोग गरिन्छ) माथि, र नियन्त्रण समूहलाई सामान्य नुन द्वारा इंजेक्सन गरिएको थियो. उत्पाद पर्सलन भनिन्छ (0.3g / kg) को लागी लगातार उपचार समूह मा प्रशासित थियो 10 दिन, जबकि खाराको मात्राको समान मात्रा नियन्त्रण र मोडेल समूहहरूमा दिइयो.
जनावरहरूको प्रोस्टेट ऊतकहरु पछि विभिन्न समूहहरुबाट माइक्रोस्कोपी द्वारा जाँच गरियो 30 दिन उपचार, त्यसो भए यो कुरा प्रकट भयो:
नियन्त्रण समूहमा, न्युट्रोफिल्सको एक सानो संख्या तर कुनै ग्रानुलोमा पहिचान भएन.
मोडेल समूहमा, Granulomas र असंख्य सूजन कोशिका प्रकट भयो।
समूहमा पर्सलोनको साथ व्यवहार गरियो, यो पत्ता लाग्यो कि सूजन कोशिका र Granulomas मोडेल समूह को तुलनामा उल्लेखनीय कम भयो.
Prestlane प्रोस्ट्याटाइटिस को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ?
केही अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि यसले प्रोस्टाटाइटिससँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ.
मा स्विट्जरल्याण्ड उरोलोजिया इन्टरनेसनलिस मा प्रकाशित एक सानो अध्ययन 2010, समीक्षा गरियो 102 क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस / क्रोनिक पेल्विक दर्द सिन्ड्रोम भएका बिरामीहरू.
बिरामीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो: पहिलो समूहaप्राप्त भयो संयोजन purslane को, गार्डेनिया, honeysuckle , dandelion, मकै रेशम र अन्य9परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा; दोस्रो समूह पाल्मेट्टो एक्लै देखा पर्‍यो. आठ हप्ता उपचार पछि, दुबै समूहले लक्षणहरुमा उल्लेखनीय सुधार देखायो.
पर्स्लेन सप्लिमेन्ट लिनेको साइड इफेक्ट के हुन्??
बर्षको अनुसन्धानले कहिले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण साइड इफेक्टहरू प्रकट गरेको छैन purslane पूरक को कारण. त्यसकारण यो पुरुषहरु को लागी एक राम्रो विकल्प जस्तो देखिन्छ जो प्रोस्टाटाइटिस को आफ्नो लक्षणहरु लाई कम गर्न को लागी हो. तथापि, हामी आफैंलाई धोका नदिऔं.
एउटा बोट, वा भिटामिन, वा पोषक तत्व, उपचार छैन. o चाँडै र सबैभन्दा प्रभावकारी प्राकृतिक उपचारहरू छन्, जडिबुटीहरू मिसाउनुपर्दछ.
प्रोस्टेट औषधिहरूको तुलनामा, purslane लिनका साइड इफेक्ट हल्का छन्. एक 2009 समीक्षाले पर्सनको प्रभावहरू पत्ता लगायो जब कम मूत्र पथ संक्रमण र प्रोस्टाटाइटिसको लागि प्रयोग गरिन्छ.
धेरै परीक्षणहरू देखाउँछन् कि यसको साइड इफेक्टहरू प्राय प्रोस्टेट औषधिहरू भन्दा कम खतरनाक हुन्छन्. सबै भन्दा साधारण साइड इफेक्ट दुर्लभ र हल्का छन्.
अघिल्लोकुन जडिबुटीले BPH लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ?
अर्कोप्रोस्टाटाइटिस को लागी प्राकृतिक उपचार